Soomaalida Minnesota oo $20,000 u ururiyey Dadka Soomaaliyeed ee ku Tabaaloobey Fatahaada iyo Daadadka..
Warbixintii: SomaliTalk.com | Dec 4, 2006
Xaflad xalay oo Isniin soo geleysey lagu qabtay magaalada Minneapolis ayaa guddiga isu xilsaaray qabanqaabinta lacag u ururinta dadka Soomaaliyeed ee ku tabaaloobey fatahaada webiyada iyo roobabka waxa ay sheegay in ay lacag ururintii mareyso meel wanaagsan oo ay reer Minnesota si hagar la'aan ah u wadaan soo ururinta deeqdaas.
Guddigu waxa ay sheegeen in ilaa hadda ay hayaan lacag dhan $20,000 (Labaatan kun oo doolar) oo loogu deeqay ummadda Soomaaliyed ee ku tabaaloobey daadaka iyo fatahada.
Kulanka xalay waxay dadkii isugu yimid iska ururiyeen $4,300 (Afar kun iyo saddex boqol oo doolar). Waxa kale oo guddigu sheegeen in masjidka Abuubakar uu soo ururiyey $11,000, masjidka Dar-Al-Hijrana $1,500, masaajida kalena lacag laga soo ururiyey, ururintiina deeqduna ay weli socoto. Dhammaan dadka Soomaaliyeedna waxaa lagu dhiiri gelinayaa in ay ka qayb qaataan deeqdaas bini aadamino, ayagoo deeqda geynaya masjidka ugu dhow.
Kulankii xalay Dec 3: Fatahaada Webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo Roobabka burburiyey Xeryaha Qaxootiga ee aagga Dhadhaab...
Kulankii Minneapolis ee loo qabtay u gargaarida Soomaalida ay webiyadu ku soo fataheen...
Shirkii looga hadlayey sidii deeq loogu ururin lahaa ummadda Soomaaliyeed ee ku tabaloobey fatahaadii webiyada Soomaaliya iyo roobabkii xoogga badnaa, oo sida habsamida u qabsoomay ayaa dadkii ka hadlay ay ka mid ahaayeen Shaafi, Sh. C/salaan Aaden, Maxamed Maxamuud Ciise, Suldaan Ibraahim Ibro, Sh. C/Raxmaan Shariif, hay'ada ARAHA iyo akhyaar kale oo dhammaantood ummadda ku booriyey sidii gacan looga geysan lahaa u gargaarida dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ka soo gaartey roobabka iyo fatahaada. Waxaana shirkaas lagu soo bandhigay sawiro laga soo qaaday dadka ku tabaaloobey fatahaada iyo daadadka.
Warbixin halkaas laga sheegay ayaa lagu xusay in ay roobabkaas ay ku dhinteen ilaa 116 qof, 9 qofna uu yaxaas cunay, dad lagu qiyaasay 100,000 ay ku maal beeleen ama ku barakaceen, boqolaal tuulona ay webiyaashu ku fataheen. Xeryha Dhadhaabna ilaa 3,000 oo qoys ay ka burbureen guryihii. Waxaa taas sii dheer biyaha oo wasakhaysan oo aan la cabi karin, iyo meel wax lagu karsado oo aan jirin maadaama dhulkii oo dhan ay biyo jiifaan iyo in Cuduro laga cabsi qabo in ay ka dillaacaan. Sidaas daradeedna loo baahan yahay gargar degdeg ah.
Dadkii shikraas ka hadlay waxaa kale oo ka mid ahaa Faarax Macallin, musharaxa baarlamaanka Kenya oo booqasho ku jooga Maraykanka, waxana uu dhammaan dadka Soomaaliyeed ugu baaqay sidii ay arrintaas gacan uga geysan lahaayeen. Waxana uu ummadda Soomaaliyeed xusuusiyey in aan cidna u maqnayn ee ay tahay in ay ayagu tashadaan.
Faarax Macallin waxa uu sheegay in Soomaaliya ay hagradeen aqoonyahankeedii. Isagoo arrintaas ka hadlaayana waxa uu yiri: Dalka Soomaaliya waxaa gabay aqoonyahankii, oo noqday kuwo ah karaaniyaal wax u qora qabqablayaal. Dal ma hormaro ilaa aqoonyahanku hoggaamiyaan.
Mar su'aal laga weydiiyey hay'adaha sida Qaramada Midoobey ee lacagaha badan adduunka weydiistey si ay wax ugu qabtaan dadka Soomaaliya ku dhibaataysan waxa uu yiri: Hay'adahaasi waxa ay u dhisan yihiin in aan weligeed fakhri laga bixin, waxana uu xusay sida wax kasta oo hay'adahaasi helaan ay badankeedu iyaga ugu laabtaan oo qiyaastii 25% oo keliya ama ka yar ay dadkii loo qoondeeyey gaarto (sidaasna 75% ay hay'adahaasi dib ugu laabato). Halkaas waxa uu Soomaalida ku xusuusiyey in ay iyagu tashadaan oo aysan cidna wax ka sugin.
Guud ahaan arrinka Soomaaliyana waxa uu ku mataley sidii sac (lo') oo soo ordaaya oo haddii uu jac (ama joogso) ku istaagi waayo ay tahay in geeska la qabto, waxana uu yiri: Soomaaliya xaalkeedi waa "Jacdii soo dhaaftay ee Geeska qabo." Halkaas oo uu ku muujinayey in guntii la soo taabtay oo ay tahay in Soomaalidu iyagu inta ay midoobaan dalkooda wax u qabtaan.
Waxana uu markale ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay midoobaan, kuna dadaalaan waxbarashada, akhriyaana taariikhda.
Sawirada Fatahaada Webiyada ka daawo Halkan... Guji...
"Nabadda Geeska Afrika waxay ku xiran tahay xorriyad la siiyo gobolada la Gumeysto" Sidaas waxaa yiri Faarax Macallin, waxa kale oo uu yiri "Soomaalidu waa Midoobi doontaa, xabashiduna waa kala goo go'i doontaa".... Akhri....
Waxaa isku doo dubaridey: SomaliTalk.com